१० दिनमा ५ जनाको हत्या- समाचार - कान्तिपुर समाचार
१० दिनमा ५ जनाको हत्या
दमक — दस दिनयता झापा र पूर्वोत्तर मोरङमा सिलसिलाबद्ध हत्याका घटना भएका छन् । घटना पारिवारिक किचलोदेखि संगठित अपराधसम्मका छन् ।
हत्याका घटना बढेपछि दुवै जिल्लाका बासिन्दा आतंकित बनेका छन् । विशेष गरी सुन व्यापारीमा त्रासको वातावरण बनेको छ । फागुन १९ गते मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या गरी गाडीको डिकीभित्र तौलिया, म्याट्रेस र त्रिपालले बेरी लुकाएको अवस्थामा प्रहरीको विशेष टोलीले शव फेला पारेको थियो ।
२० गते पूर्वी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ७ मधुमल्लामा एक महिलाको बलात्कारपछि ढुंगाले अनुहार कुच्याएर हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । २६ गते उर्लाबारी नगरपालिका ९ का ५८ वर्षीय चन्द्रबहादुर दर्जी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । २७ गते लेटाङ नगरपालिका २ की ३७ वर्षीया कौशिला राईको शव आफ्नै घरमा हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो । सोमबार झापा बिर्तामोडका सुन व्यवसायी साजन मुखियाको हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । लगातारको हत्या घटनाले पूर्वमा संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको आशंका छ । अज्ञात समूहबाट केहीका परिवार तथा व्यापारीलाई चेतावनी आउने गरेकाले थप आतंकको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हत्याका प्रकृति क्रूरतापूर्ण देखिन्छन् । अवैध रूपमा भित्र्याएको ३३ केजी सुन हराएको विषयको विवादका कारण सनम शाक्यको हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै बिर्तामोडका सुन व्यवसायीको हत्याले आतंक सिर्जना गरेको हो । दुई वर्षदेखि बिर्तामोडमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्दै आएका २६ वर्षीय साजन मुखिया फागुन २० गतेदेखि बेपत्ता थिए । उनको शव सोमबार इलामको रोङ गाउँपालिका–३ कोल्बुङमा फेला परेको थियो । साजनको हत्याविरुद्ध बिर्तामोडका व्यवसायीले मंगलबार बजार बन्द गरेका थिए ।
उर्लाबारीका शाक्यको पनि अपहरणपछि हत्या भएको थियो । उनका काका धर्मराज शाक्यका अनुसार १६ गते साथीले बोलाएपछि घरबाट निस्केपछि शाक्य परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् । उनको शव महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको टोलीले फागुन १९ गते विराटनगरबाट बरामद गरेको थियो ।
यसै घटनाको विषयमा जोडिएको भन्दै प्रहरीले झापा चारआलीका लाक्पा शेर्पालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको जनाएको छ ।
मधुमल्लास्थित सिसौलीकी ४४ वर्षीया शान्तिकुमारी तामाङको २० गते शव फेला परेको थियो । बलात्कारपछि ढुंगाले हिर्काएर विभत्स हत्या गरिएको शव गाउँकै राम्री खोलामा किनारमा फेला परेको हो। हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
२७ गते शव भेटिएकी कौशिला राईको शरीरका विभिन्न भागमा चोट थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र खडकाका अनुसार कौशिला र उनका श्रीमान् ३७ वर्षीय किरण भनिने कुमार राईबीच राति झगडा भएको थियो । श्रीमतीको हत्या गरेर कुमार बिहानै फरार भएका थिए । उनको खोजी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक खडकाले बताए ।
बिर्तामोड– झापाको बिर्तामोडका सुन व्यवसायी साजन मुखियाको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले हत्यामा बिर्तामोड–३ सैनिकमोड बस्ने २९ वर्षीय पारसकुमार देव, बिर्तामोड–८ त्रिवेणी टोल बस्ने १९ वर्षीय दीपेश पौडेल र बिर्तामोड–३ कै २३ वर्षीय प्रकाश भन्ने चिरञ्जीवी ओलीको संलग्नता देखिएको बतायो । मुखियालाई व्यावसायिक रिसइबीका कारण हत्या गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अभियुक्तलाई मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक, खुनडाँका र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
११ जना घाइते
चितवन — पृथ्वी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सोमबार राति भएका दुर्घटनामा दुईको मृत्यु र ११ जना घाइते भएका छन् ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ३ चुम्लिङटारमा कार दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ३ जना घाइते भएको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृत्यु हुनेमा धादिङ थाक्रेका २३ वर्षीय सरोज सुवेदी रहेका छन्।
धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको बा१२च ४६१५ नम्बरको कार अनियन्त्रित भएर पल्टेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रभुप्रसाद ढकालले बताए । कार पल्टँदा घाइते भएका चारै जनालाई उपचारका लागि भरतपुर ल्याउँदै गर्दा एक जनाको बाटोमा नै मृत्यु भएको उनले बताए । घाइते अन्य तीन जनामा धादिङ धुनीबेंसीका २४ वर्षीय शरद रोक्का, बेनीघाटका २१ वर्षीय महेश श्रेष्ठ र जुँगेखोलाका २४ वर्षीय अनुप सिंह रहेको चितवन प्रहरीको भनाइ छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा सोमबार राति नै भएको अर्को दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ६ पाँचकिलोमा केए०१एएच २५९६ नम्बरको ग्यास बोक्ने खाली बुलेट मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गर्दा सडकबाट ३० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा स्टेरिङमा च्यापिएर बुलेट चालकको मृत्यु भएको छ । उनको सनाखत भएको छैन । उनी भारतीय नागरिक हुन सक्ने चितवन प्रहरीको अनुमान छ । शव भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी जन्ती बोकेको ट्रयाक्टर पल्टँदा आठजना घाइते भएको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रत्ननगर सौराहा चोकमा जन्ती बोकेको ना४त ६२३६ नम्बरको ट्रयाक्टर अनियन्त्रित भएर पल्टेको थियो।